Xildhibaanada baarlamaanka oo yeelanaya kulan gaar oo ku saabsan BBI | Star FM
Home Wararka Kenya Xildhibaanada baarlamaanka oo yeelanaya kulan gaar oo ku saabsan BBI
Xildhibaanada baarlamaanka oo yeelanaya kulan gaar oo ku saabsan BBI
Mudanayaasha golaha qaran ee xeer dejinta ayaa la filayaa in maalmaha nagu soo aaddan ay yeeshaan kal-fadhi gaar ah oo la xiriira hindise sharciyeedka BBI.
Wargeyska The Standard ee ka soo baxo gudaha dalka ayaa ku warramaya in ay suurtagal tahay in qorshaha BBI la ansaxiyo iyada oo labada aqal ee baarlamaanka iyo senate-ka aynan tixgelin warbixinta guddiga arrimaha sharciga iyo cadaaladda ee (JLAC)
Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ahna xildhibaanka deegaanka Kipipiri Amos Kimunya ayaa sheegay in kulanka gaarka ah uu qabsoomi doono inta u dhexeysa maalmaha Talaadada iyo Khamiista ee toddobaadkan.
Waxaa uu xusay in hindise sharciyeedka BBI ee la doonayo in lagu beddelo qaar ka mid ah qodobada dastuurka dalka uu mari doono akhrintii labaad.
Mr. Kimunya ayaa sheegay in xubnaha baarlamaanka aynan wakhti dheeraad ah ku sii lumin karin arrinkan sidaas awgeedna hadii warbixin ay jirto ama aan la soo saarin labaduna ay yeelanayaan kal-fadhi gaar ah oo lagu meel marinayo qorshaha dowladda.
Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ayaa dhanka kale rajeeyay in aqalka sare uu sidoo kale tallaabo qaadi doono si horay loogu sii tallaabsado geeddisocodka BBI.
Madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee aqalka senate-ka ahna senatarka Siaya James Orengo ayaa isna sheegay in ay suurtagal tahay in ay isbuucan kulan ku saabsan BBI yeeshaan.
Previous articleMexico oo laga xaqiijiyay in ka badan 2,000 oo ah dhimasho ka dhalatay COVID-19
Next articleHoggaamiyaha dalka oo casuumay madaxweynaha Tanzania